ပစ္စည်းအားလုံး Sold Out ဖြစ်သွားတဲ့ Kylie ရဲ့ Valentine's Day Makeup Collection | CosmeticMyanmar
Home » Article » ပစ္စည်းအားလုံး Sold Out ဖြစ်သွားတဲ့ Kylie ရဲ့ Valentine’s Day Makeup Collection
အသက်အငယ်ဆုံး သူဌေးမလေး Kylie ကတော့ ချမ်းသားပြီးရင် ချမ်းသာနေပါတယ်။ အခုလည်း သူမရဲ့ Kylie အလှကုန်ကနေ ထုတ်လုပ်တဲ့ Valentine’s Day Makeup Collection ပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင် စတင်ဖြန့်ချီတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ အစမှာတင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက cosmetic ချစ်သူတွေ ဝယ်ယူအားပေးတာကြောင့် ပစ္စည်းအားလုံး ရောင်းကုန်သွားပါပြီတဲ့နော်။
Kylie cosmetic ဝက်ဆိုဒ်မှာလည်း Valentine’s Day နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အားလုံးနီးပါး Sold Out ဖြစ်သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Valentine’s Day Makeup Collection ကို ဖေဖော်ဝါရီ (၁)ရက်နေ့ မတိုင်ခင်ကတည်းက ရောင်းချမယ်လို့ ကြေငြာထားပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးအကြိုညတွေကတည်းက သတင်းတွေ ထွက်နေခဲ့တာပါ။ Kylie ဟာ သူမရဲ့ Instagram မှာ Destiny ရဲ့ ကလေးကာတွန်း “Cater2U” ကိုနောက်ခံထားပြီး Valentine’s Day Makeup Collection ကို story ပုံစံနဲ့ fan တွေကို အသိပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
It’s HERE!! The VALENTINE COLLECTION is now LIVE! ❤️ Be quick to shop before it’s gone, at KylieCosmetics.com ✨?
A post shared by Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) on Feb 1, 2019 at 3:00pm PST
Valentine’s Day Makeup Collection ပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင် ပန်းရောင်ကို အခြေခံထားပြီး အသည်းပုံလေးတွေနဲ့ ပန်းပွင့်ပုံလေးတွေကို ချစ်စရာ ဒီဇိုင်းပုံစံ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အများဆုံးနဲ့ အဓိက ရောင်းချတာကတော့ နှုတ်ခမ်းနီဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီအမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ matte , high gloss နဲ့ liner တို့အပြင် eyeshadow palette ဒီ palette မှာတော့ matte, shimmer, peach နဲ့ glitter တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Valentine’s Day ဒီဇိုင်းကတော့ ပန်းရောင်နဲ့ အနီရောင်အပြင် ရွှေရောင်နဲ့ သဘာဝအရောင် အနည်းငယ်ကိုပါ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Valentine’s Day Makeup Collection နာမည်ကိုတော့ Built To Last ပုံပြင်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့anod to love လို့ ပေးထားပါတယ်။
Valentine’s Day Makeup Collection ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄)ရက်မရောက်ခင်ပဲ အားလုံးနီးပါး ကုန်သွားပြီဖြစ်တာမို့ နောက်နှစ်ကျရင် စောစောဝယ်ထားကြဖို့ အားလုံးက ပြောနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Photo and Ref: https://www.kyliecosmetics.com/
သဘာဝအတိုင်းလှပတဲ့ Make Up look လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ Maybelline Fit Me ရဲ့ Two Way Cake လေးရှိနေပြီနော်...
ချစ်သူလေး သဘောကျမှာသေချာနေတဲ့ LUSH ရဲ့ Valentine's Day Gift
Tags: Kylie JennerSells OutValentine's Day Makeup Collection